मास्क - Aarthiknews
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले गरेको अध्ययनमा अझै पनि २७ प्रतिशतले मास्क नलगाएको देखिएको छ । परिषद्ले सार्वजनिक स्थलमा गरेको अध्ययनमा यस्तो देखिएको हो । ...
त्यस्तै जनस्वास्थ्य मापदण्ड तथा सुरक्षा मापदण्ड उल्लंघन गर्ने व्यक्ति, समूह तथा सस्था भए सोको सञ्चालक समेतलाई कारबाही गर्ने जनाएको छ । ...
मास्क कस्तो लगाउने ? फिल्टर भएको मास्क कति सुरक्षित छ ?
एन ९५ मास्कले ०.३ माइक्रोन्सको आकार भएको कणलाई ९५ प्रतिशतसम्म रोक्न सक्छ । जबकि कपडाको मास्कले ६९ प्रतिशतमात्र रोक्न सक्छ । कोरोनाको कणको आकार ०.६ देखि ५ माइक्रोन्ससम्म हुने भएकोले...
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले मास्क नलगाई हिँड्ने व्यक्तिलाई कारवाही गर्दा करीब रु एक लाख राजश्व संकलन गरेको छ । कार्यालयले दुई साताका अवधिमा एक हजार ५९ जनालाई कारवाही गर्दा प्रतिव्यक्ति...
अहिले बजारमा बिक्री बितरण भैरहेको के एन ९५ मास्क पनि रिचार्जरले ५० रुपैंयामा उपलब्ध गराउने दावी गरेको छ । त्यसै गरी कोभिड प्रतिरोधात्मक भिटामिन सी युक्त डबल सी ब्राण्डको जुस...
अब मास्क नलगाई घरबाहिर निस्कनेलाई प्रहरीले पक्राउ गर्ने भएको छ । मास्क नलगाई घरबाहिर निस्कनेलाई पक्राउ गरी संक्रामक रोग ऐन २०२० अनुसार कारबाही गरिने भएको हो । ...
ब्राजिलका राष्ट्रपतिलाई मास्क लगाउन आदेश, नलगाए दैनिक ३८७ अमेरिकी डलर जरीवाना
संघीय न्यायाधीश रेनतो बोरेलीले मंगलवार उक्त आदेश दिएको बताइएको छ। यदि राष्ट्रपतिले उक्त आदेश नमानेमा दैनिक ३८७ अमेरिकी डलर जरीवाना तिर्नुपर्ने बताइएको छ। यो नेपाली रुपैयाँ ४६ हजारभन्दा बढी रकम...
हजार क्यास प्वाइन्ट पाइने, ५ रुपैयाँमा सर्जिकल र सयमा केएन ९५ मास्क
रिचार्जरले घर, पसल, अफिस, बैंक तथा वित्तीय संस्था, होटल लगायत सबै क्षेत्रको लागि कोभिड प्रोटेक्टिभ प्रोडक्टको कम्बो प्याक समेत सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराउने जनाएको छ । ७ हजार ९९९ देखि...
बैबाहिक कार्यक्रम गर्दा सामाजिक दुरी कायम गर्नु पर्ने, ५० जना भन्दा बढी सहभागी हुन नपाउने, मास्क र पञ्जा लगाउनु पर्नेलगायतका आधारभूत स्वास्थ्य सतर्कता भने अपनाउनै पर्ने व्यवस्था गरिएको अधिकारीहरुले जनाएका...
आइएमएस ग्रुपकाद्वारा नेपाल चिकित्सक संघलाई मास्क हस्तान्तरण
मनका धनी मलहोत्राले अहिले ब्याबसाय गर्न भन्दा पनि सामाजिक कामका लागी मास्क कम्पनि सन्चालनमा ल्याएको बताए । उनले आफ्नो कम्पनीले दिनमा करिब ७० हजार मास्क उत्पादन गर्ने र शुरुका दिनमा...
मोबाइल फोन इम्पोर्टर्स एशोशिएसनद्वारा मास्क हस्तान्तरण
कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रण गर्ने सुरक्षा तथा स्वास्थ्य निकायको प्रयत्नलाई सहयोग गर्न मोबाइल फोन इम्पोर्टर्स एशोशिएसनले नेपाली सेनाको सैनिक स्वास्थ्य महानिदेशनालयलाई मास्क हस्तान्तरण गरेको छ । बुधबार १० हजार थान...
हिजो सोमबार बेलुकादेखि मास्क उत्पादन शुरु गरेको आईएमएस ग्रुपले अहिलेसम्म ५० हजार मास्क उत्पादन गरिसकेको छ । आईएमएस ग्रुपले माक्स उत्पादन गरिरह्दा माक्सको फिता सिलाउने जनशक्तिको भने अभाव भएको आईएमएस...
बजारमा मास्क र स्यानिटाइजरको अभाव भैरहेका बेला रिचार्जरबाट विद्युतीय उपकरण खरिद गर्दा निशुल्क मास्क र स्यानिटाइजर बितरण गर्दा सेवाग्राहीलाई सहज हुने विश्वास रिचार्जरले लिएको छ । ...
माक्स छैन !
भक्तपुर नगरपालिका–१ च्यामासिंहस्थित साँचो फार्मेसीले ‘यहाँ मास्क छैन’ भन्ने बोर्ड नै टाँसेको छ । त्यहाँ मात्रै होइन, यहाँकै च्यामासिंह मेडिकल, आरती फर्मालगायत यहाँका अधिकांश औषधि पसल तथा क्लिनिकले त्यस्ता बोर्ड...
मास्कको मूल्य बढी लियो ? ११३७ मा फोन गर्नुहोस्
कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वभर बढ्दै जाँदा र विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाललाई पनि उच्च जोखिममा राखेपछि नेपालमा मास्कको माग उच्च भएको छ । मास्कको माग उच्च भएपछि नेपालमा मास्कको कालोबजारी...